Last nohavaozina: Jul. 21 2019 | 1
Dia fantatsika fa zava-dehibe aminao ny mitandrina ny fiaraha-monina soa aman-tsara, ka dia te handany fotoana vitsivitsy mba hahatonga anao mahatsapa fiarovana an-tserasera.
Manaraka ireo hevitra maso tsotra vitsivitsy, ary ianao manana azy eo amin'ny harona!
Tokony ho mora ny tenimiafina hahatsiaro ny anao, fa mafy ho an'izay mba te maminavina. Anarana dia mora ny mitadidy, fa araka ny prying mora maso ny maminavina!
Date My Pet manana mpikambana mahagaga rafitra hafatra. Aza maika hanome avy fifandraisana misy vaovao raha tsy vonona sy aina. Aza avela olona hanosika anao. Ento ary ny haingana sy amin'ny ho sambatra.
Raha misy olona ao amin'ny toerana mangataka ny nindram-bola, lakolosy fanairana tokony hanomboka ny hanaitra. Aza manome na iza na iza eo amin'ny toerana vola, na dia tsara ny antony toa. Mba tatitra misy mpikambana izay mangataka vola amin'ny Support Team, izay ho faly ny fanadihadiana.
Tadidio foana fa tokony hijanona amin'ny fanaraha-maso. Hihaona amin'ny toerana ho an'ny besinimaro, milaza olona iray ny fotoana sy ny toerana handeha ianao, ary fotoana mba hiantso azy ireo amin'ny fotoana nomena ampitoero ho tsara no mitranga. Raha toa ka mendrika ny daty, Ho tanteraka izy ireo hahatakatra.
Ny ankamaroan'ny olona izay mihaona amin'ny aterineto ho tena Olona toa antsika ihany, fotsiny izay mitady ny daty na ny fisakaizana. Raha mbola manaraka ny fitsipika volamena sy hikarakara – izahay manana antoka ianao fahafinaretana!
Tsarovy, Date My Pet tsy handefa anao na e-mail nangataka na inona na inona antsipiriany manokana.